ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ အြန္လိုင္း - ဗီဒီယိုစကားပြောဖီးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့
အာရပ်-ချက်တင် ချက်တင်အရပ်-အမေရိကန်အသံချက်တင်ရပ်စကားပြောကွန်ယက်များ၊အာရပ်အမေရိကန်နှင့်အားလုံးရပ်ကမ္ဘာတဝှမ်း။ ေအာစကားပြော၊ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏အသား၊ဘာသာစကားနှင့်ဇစ်မြစ်။ ကိုရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရပ်နီးမှအခြားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှု။ စကားပြောရပ်၌ယုံကြည်၏တန်းတူရေးလူမျိုးမခွဲခြားဘဲအသက်၊ကျား၊ဘာသာ၊အသားအရောင်၊လူမျိုးရေးသို့မဟုတ်အခြားအချက်များ။ ဒါဟာအရပ်နိုင်အောင်အဆက်အသွယ်များ၊သူငယ်ချင်းများပါစေနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရပ်များနှင့်အခြားမဟုတ်သော-ရပ်။ အာရပ်စကားပြောရပ်စကားပြောထိန်းချုပ်မှုအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတစ်လမ်းအဖြစ်လွယ်ကူသောအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ စောင့်ရှောက်အာချက်တင်ဆိုက်အထိစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သောချက်တင်အကူအညီဖြင့်များဆိုက်အိပ္ခနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး။ ေအာချက်တင်၊အရာ၌ခန့်ထားပြီအမျိုးမျိုးသောအာရဗစ္၊ချက်တင်နှင့်မအာချက်တင်ကနေစာရင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ေအာစကားပြော၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အမျိုးမျိုးသောအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းသည်နှင့်အညီသင့်ရဲ့အရသာ၊အကျိုးစီးပွားနှင့်နောက်ခံ။ အမေရိကန်အာရဗစ္၊အဂၤလိပ္၊အာရဗီ၊အာရဗစ္၊ယား၊လက်ဘနွန်၊တိုင်းစကားပြော၊ ချက်တင်၊ဆံုစကားပြောခြင်း၊အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ကမ်ချတ်၊အာရဗစ္-ကနေဒါ၊အီဂျစ်အများအပြားအခြားအာချက်တင်နှင့်မအာချက်တင်အလွယ်တကူတွေ့အပေါ်ချက်တင်ဆိုက်။ ကျနော်တို့သာအမေးခံရဖို့သင်ဖော်ရွေပြီးလေးစား။ အာချက်တင်တကယ့်လူတကယ့်လူမှုလူ။
ကောင်းစွာ၊အများအပြားအရပ်။ ကောင်းရှိပါတယ်အမျိုးသမီးအရပ်လုံးကျော်။ ကုန်စုံဆိုင်၊စာအုပ်ဆိုင်၊အကင်၊တစ်ခါတစ်ရံတောင်ကလပ်။ ကိုယ့်အကြောင်းသွားချင်ပါတယ်အဘယျသို့ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်သွားနေရာသင်ကြိုက်။ သင်မယ်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်။ ဆိုဟေးငါစဉ်းစားသင့်အိမ်ချစ်စရာ၊ကိုယ့်လာပြောမင်္ဂလာပါသို့မဟုတ်ငါ မယ်လို့နောင်ရှာဖွေနေစဉ်အတွက်မျက်စိနှင့်ကြည့်စိတ်ချယုံကြည်။ ငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ။
ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယောက်ျားသည်သူမ၏အသက်တာ၏၊သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်ဦးအေးမြကောင်လေး၊သငျသညျဖွစျရမညျအတွက်အကောင်းအကြင်။ စတင်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာ၊ယုံကြည်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့သဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အောင်လိမ့်မည်အများကြီးအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ထိုအခါတစျရွက်ဘေးဖယ်၎င်း၏အဟောင်းအလေ့အထနှင့်ရပ်တန့်ဘို့အရှာနေသောမင်းသားချို
လို။ ဤသည်အဘယ်သို့ငါကိုယ်ကိုယ်ကပြောတဲ့အခါငါရပ်၏ရှေ့တွင်ကင်မရာများ၊တစ်ချိန်ကနှင့်ချက်ချင်းသဘောပေါက်ဤကစားတဲ့စကားပြောပြင်သစ်၊ မရမှာဖြစ်သူ၏စွန့်ပစ်ခြင်း၊နယ်စပ်အပေါ်ပြီးပြည့်စုံအောင်တော်နှင့်ပျော်စရာ။ ရှိအောင်၊ဒါကြောင့်အလွန်အဆင်းလှသော၊ရိုးရှင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊မည်သူမဆိုအလှည့်တွင်ကမ်တစ်ခုမှာကိုနှိပ်ပါနှင့်အတူ ကြွက်ဘဲရှာဖွေဖို့အတွက်နှစ်နာရီ။ တစ်ဦးရှိပါတယ်ကြီးမားသောကြယ်အတွက်၊သင်လိုအပ်သောအကာအရှုံး။ မှ"လူ"ဘေးထွက်နှင့်ပတ်သက်။စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုခြင်းအခြမ်းအခန်းတွင်၊ငါဖန်ဆင်းမယ့်အချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကြောင်ကစားတဲ့တွေ့ဆုံ၊ငါပင်မှစီမံခန့်ခွဲရောမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ။ ဒါဟာအစကောင်းသင်ပြောပြဖို့အကြောင်းသီအိုကစားတဲ့ခဲ့ေ ရှိသမျှကျော်ထံမှပြင်သစ်၊သို့သော်အစည်းအဝေးနှင့်အတူ၊သော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများအကြောင်း၊ငါသည်တွေ့ဆုံ ၊ဆွစ်ဇာလန်နှင့်ပင်တစ်အတန်ငယ်ဆုံးရှုံးအာဂျင်တီးနားအဘယ်သူသည်စကားမပြောပေ။ များသောအားဖြင့်သင်ဆဲအလဲအတွက်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများလာသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောပြင်သစ်၊ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါဘူး။ ငါပြီးသားအစေ့ဆော်ခံစားရတဲ့အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားရန်ဤကြီးစွာသောကစားတဲ့စကားပြောသုံး။ထိုအခါငါလိမ့်မည်သင်ဖျော်ဖြေ၊သင့်ကိုငါကကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ။:ဟုတ်ပါတယ်၊ငါအားပြောပြရန်မေ့လျော့ကြောင်းဤကစားတဲ့စကားပြောပြင်သစ်ကနေတိုက်ရိုက်လာကင္မရာကို(လင့်)။.
၊အာရပ္ေစာ္ဘြားနုိင္ငံ၊ဒူဘိုင်း၊ငါအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်မိမိအအသက် ၃၀ နှင့် ၄၀
ပါကတုန့်ပြန်မှုနှုန်းနိမ့်သည်၊ဒါကြောင့်နည်းလမ်းများကြောင်းအသုံးပြုသူမရှိသလောက်တုံ့ပြန်။ မြင့်မားသည်ဆိုပါက၊အသုံးပြုသူအများကြီးပိုဖွယ်ရှိသည်။ ဓါတ္ပံုမ်ားကို"အဖြစ်မှတ်သားမဂုဏ်"ကိုသာအားဖြင့်ကြည့်ရှုသောသူတို့အားအသုံးပြုသူများရှိရန်သဘောတူခင္းဆှအကြောင်းအရာ။ အပိုင်း"အထိမ်းအမှတ်ဓာတ်ပုံအဖြစ်"ဂုဏ်"၊မည်သာဖြစ်မြင်နိုင်သောသူတို့အားအသုံးပြုသူများရှိရန်သဘောတူခင္းဆှအကြောင်းအရာ။ အပိုင်း"ရှာမရရှိနိုင်ကြပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ပိတ်အပိုင်း"၏ပါဝင်မှုအတွက်ရှာရန်"၊သင်ပိုမိုသင်ယူနိုင်နှင့်အပြောင်းအလဲကို။
ကျနော်တို့၏ကြီးမားသောအရေခေတ်အာရဗီညာအမည်များနှင့်အတူ။ အမည်တစ်ခု၏ရပ်မိန်းကလေးဖြစ်ရမည်။ နာမတော်၏မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းနားလည်သောအလူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြတ္စလျှင်၊သာ။ ဒါဟာဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွီးအကဲတွေဟာအရမ်းနေသည်ရှိခြင်းအပေါ်ကောင်းတစ်ဦးသဘောဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စရေးသားပြုစုခဲ့သည်မှာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တာဝန်မရှိဟုယူဆသည်စစ်မှန်ဤအမည်များ။
၊ဘယ်လိုကောင်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာပေါ့ပေါ့စကားပြောဆို။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအခြားသူများထံမှကြောင့်အဝကင်မရာ၊ကအများကြီးစျေးသက်သာထက်အစဉ်အလာအာကစားတဲ့စကားပြောတြ၊အခါအထူးသဖြင့်ရာနဲ့ချီရှိပါတယ်လိုင်၏အဘျချိန်တည်းမှာ။ အ တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ဤကစားတဲ့၊တူနီးရွား၊ေမာ္ရုိကို၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊စသည်တို့ကို။၊ ဒါပေမယ့်လည်းအရပ်မှအရှေ့အလယ်ပိုင်း။ အာရပ်အမျိုးသမီးချစ်လိမ့်မည်အခွင့်အလှည့်ကိုကင်မရာကိုအကွာလွန်းအလျင်အမြန်နှင့်အချစ်လိမ့်မည်အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များ။ ကမ်မိုက်ဖြစ်ကြ၏အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်အတူအစွမ်းထက်ဆာဗာကိုအလုပ်လုပ်သောကမ်သာျဖစ္ပါသည္။ အရာရာ နှင့်အဖုအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်။
နေအိမ်-ပဲရစ် ဃ '
အ လ ဃ အသီးအသီးလူတန်းစား၊တီသည်လူတန်းစားကတည်းကပထမဦးဆုံးပွဲတော်၏အဓါတ်ပုံ၏ကျော်ကြားသောလူတန်းစား၊အီး။ ပညာေပး၊ျပပြဲမ်ား၊ဓာတ်ပုံပြဲမ်ား၊လူတန်းစား၊လင်းနို့များ၊အစုစုကိုဖတ်ကူညီ
လို။ ဤသည်အဘယ်သို့ငါကိုယ်ကိုယ်ကပြောလာသောအခါအချိန်များအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြော၊ငါအားလုံးချက်ချင်းကိုသိပါလိမ့်မယ်ပေါ်ရရှိနိုင်သောချက်တင်ကစားတဲ့ပြင်သစ် ကနီးစပ်စုံလင်ခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်။ မှာအသွင်အပြင်ကြောင့်အလွန်အဆင်းလှရိုးရှင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊လူတိုင်းလှည့်နိုင်သူတို့ရဲ့ကမ်တနှိပ်ပြီးရှာဖွေဖို့ရန်မလိုဘဲနာရီ။ တစ်ဦးရှိပါတယ်ကြီးမားသောကြယ်စကားပြော၊သင်တကယ်ရှိသည်ဖြစ်ကာ လက်လွတ်။ အဘက်လူအများ၊ကောင်းစွာအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပူပန်ဘက်၊ငါဖန်ဆင်းအများအပြားစိတ်ဝင်စားစရာအပေါ်ကြုံတွေ့ဖစ္သျကစားတဲ့စကားပြောနှင့်ငါပင်မှစီမံခန့်ခွဲကောက်နေမိန်းကလေးတစ်ဦး။ အကောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာသင်ပြောပြပါချက်ချင်းပဲဘာကစားတဲ့စကားပြောညစ္ညစ္အတြက္ပြင်သစ်ကနေအားလုံးကိုပြင်သစ်ကျော်ဒါပေမယ့်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားနိုင်ငံသား၊ငါသည်ပြပ်ဝပ်အပေါ်ဘယ်လ်ဂျီဆွစ်ဇာလန်နှင့်ပင်အာဂျင်တီးနားအချို့ပျောက်ဆုံးသောသူမပြောပြင်သစ်ကောင်းစွာ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊သင်ကျလိမ့်မည်နေဆဲအပေါ်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောပြင်သစ်ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါဘူး။ ငါပြီးသားအစေ့ဆော်ခံစားရတဲ့အစမ်းသပ်ဖို့သင်သည်ဤထိပ်တန်းကစားတဲ့စကားပြောခန်း။ ဒါကြောင့်၊ငါသည်သင်ပျော်စရာရှိသည်၊သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်)
အထိ၊ကျွန်မဟာ နှင့်ရွေ့လျားဖို့ ။ ဘတ်ခန့်။
အထိ၊ကျွန်မဟာ နှင့်ရွေ့လျားဖို့ ။ ဘတ်ခန့်။ ငါလိုလူကိုရှာဖွေဖို့ပြောတော့ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးစေတ။။။ဖြစ်ထွက်လှည့်။ ၁၉ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးစားခ်င္ရွာ။ အသွင်အပြင်။ မ်တည်ဆောက်၊အမြင့်-၁။၆၈-၁။၇၀၊တိုတောင်းသောဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်၊အခါအားလျော်ပြန်လာမှ ၂၀၀၇။ ငါအလုပ်နှင့်အတူအဘယ်သူသည်ငါ့ကိုတူလူတို့ကြောက်လန့်နေကြသည်မဟုတ်၊သူတို့မျက်နှာအင်္ဂါပုံသဘောမှာရှာ၏လုံလောက်သောနှင့်အရည်အချင်း ။ ။ ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ကျွန်မဟာခုနစ်။ ချွန်သည်။ ၇။ ငါသင်ပြောပြနိုင်အများကြီး၊ဒါပေမယ့်အဓိကအရာဟုငါထင်ရှားသည်ငါဖြစ်၏သောကောင်းစွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ပညာတတ်လူငယ်တစ်ဦးသည်လူ။ ငါနှင့်အတူသက်သာအရက်နှင့်ဆေး၊ငါသည်အမျိုးသားမဟုတ်သောကြောင့်ဖက်ရှင်၏၊ဒါပေမယ့်ကြောင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုငါ့က်ား။ ငါအများအပြားဝါသနာဝါသနာ၊ဒါပေမယ့်မကြာခဏဖျားနာနေရ။ ဤအဖြစ်သာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏အဘယ်သို့ငါပြောနိုင်ပါတယ်။
အတော်များများစာဖတ်သူတွေမေးလျှင်ရန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဖြည့်ဆည်းတရုတ်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်တရုတ်ယောက်ျားလျှင်အွန်လိုင်းသင်အဝေးကနေအလယ်အဂၤလန္။ တဦးတည်း၏အတားအဆီးစေခြင်းငှါ တစ်ခုရှိဘာသာစကားအတားအဆီး၊ဒါပေမယ့်ဒါကလည်းဖြေရှင်းနှင့်အတူအကူအညီ၏။ ဒီ့ပြောခဲ့တဲ့၊ဒါပေမယ့်ငါ့အဖို့အံ့၊ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့တရုတ်အမျိုးသမီးရှိသည်သောသူတစ်ဦးမျှမျှတတသာမန်အပေါ်ပရိုဖိုင်ကိုဒီလူမှုကွန်ယက်။ ထို့အပြင်၊မိန်းကလေးများပိုင်ဘူးအရုရွားနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှရှိသည်။ သင်သည်လည်းဖြည့်ဆည်းတရုတ်အမျိုးသမီးအတွက်ရာအလိုက်အုပ်စုအကြောင်း။ သင်ရှာဖွေလိုလျှင်၊ရှိလိမ့်မည်အတော်လေးအနည်းငယ်ပဲ။ ဖြစ်၏နေထိုင်သူများအတွက်ဟာင္ေကာင္၊ နှင့်ဝမ်၊သူတို့ကဒီဝန်ဆောင်မှုကိုသုံး။ သင်တန်း၏ရှိပါတယ်၊ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းကြီးမားတဲ့အတွက်အမြို့မြို့။ သို့သော်၊လျှင်သင်သက်ဝင်ပေးဆောင်ဝန်ဆောင်မှု၊သင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့မည်သည့်မြို့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတော်တွင်၊ဘယ်မှာ ၉၀ ၏အသုံးပြုသူများလိမ့်မည်ဒေသခံနေထိုင်သူများ။ ဤသည်တရုတ်မန်၊တစ်ဦးကလူမှုရေးကွန်ယက်တွင်တဦးတည်းပုလင်း၊အီလက်ထရောနစ်ငွေအဝန်ဆောင်မှု၊တက္ကစီ၊နှင့်အရာအားလုံးအတွက်အရေးပါသည်ခေတ်သစ်တရုတ်။ လျှင်သင်ဖို့စီမံဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်စကားပြောအတွက်ယခင် ၃ ရမ္မ်ား၊ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအချိန်ရွှေ့ဖို့ - ဤသည်ကိုဆက်လက်ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာလည်းအသုံးဝင်သည်ရှာဖွေသူတစ်ဦးမိတ်ဖက်သင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေအတူတူလူလိုသူချက်တင်။ သင်သည်လည်းအစုအေနာ္မာဘယ်လောက်ထွက်ရှာဝေးဤပုဂ္ဂိုလ်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဤအက္ပ္ကိုအကြွင်းမဲ့အာဏာအတွက်ခေါင်းဆောင်သောပးသရှာဖွေဖို့တရုတ်နေထိုင်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုပင်အလားတူအမည်ကိုအမည္တူ၊တစ်ဦးမိတ္တူဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမခက်ခဲသည်နားလည်ရန်အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊နှင့်လည်းအလွန်လွယ်ကူသောရှာတွေ့ဖို့အ အတွက်ဝန်ဆောင်မှု။
ဤအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်အရာအားလုံးဖော်ပြချက်သည်။ အမည်နှင့်တွဲရေးအတွက်မြေပုံ။ အရပ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မြေပုံကိုဖန်တီးပြီးပြည့်စုံအတွက်အားဖြင့်သာမန်လူတွေပါ။ သင်သည်လည်းပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အချက်အလက်။ ဒီကူညီပေးပါမည်လူအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ကမ္ဘာ့သူတို့ကိုပတ်လည်မှာ။ သာ ဇက်၊ဖော်ပြချက်နှင့်မြေပုံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကျနော်တို့အရပ်အပေါ်ကမ္ဘာ့မြေပုံ။ ပိုမိုသင်ယူရန်နှင့်ပိုမိုလေ့လာ။ ၈၀။၂ကီတာင္၏။စိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့သောနေရာများသင်တို့ပတ်လည်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ကြည့်ယူငါတို့၏အလှန်မြေပုံနှင့်အတူအရပ်ပတ်လည်ရဖို့ပိုပြီးအသေးစိတ်သတင်းအချက်အရသိကမ္ဘာကိုပိုကောင်း။ အရပ်နှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များဆက်ပြောသည်နေကြတယ်နှင့်တည်းဖြတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့် သူတို့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအသုံးပြုသူများနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိဘဲကြိုတင်အတည်ပြုပြီးနောက်ဆက်တွဲညှင်း။ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ဖတ်ရန်၊စောင့်ကြည့်ရန်၊သို့မဟုတ်စွက်ဖက်။ ဓါတ္ပံုအစီရင်ခံစာ၊သင့်ကျောင်းများ၊နှင့်အခြားဖော်ပြချက်။ ဇာတ်လမ်းခွင့်ပြုပါသင်ပြောပြရန်အရာတစ်ခုခုကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်နှင့်အသေးစိတ်အတွက်။ အခြားခေါင်းစဉ်များအတွက်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတည်ရှိနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်၊နှင့်အခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ခြင်း-သာရိုသေလေးစားမှုအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသွာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မေတ္တာကိုသင်ပြုချင်သမျှကို။ ဒီ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်သောပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်၊နှင့်ပါရှိသည်သာသတင်းအချက်တစ်စုံတစ်ယောက်ဆုံးဖြတ်ဖို့ထည့်ပါ။ ပုံစံအတွက်အတွက်ကြောင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးနောက်။.
မှာအာရဗီနား၊ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖန်တီးရန်ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်ဖော်ရွေသောလေထုသည်အဘယ်မှာရှိသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တွက်တိရစာန်-သင်သည်သင်၏အားလပ်မှာ။ မှာအာရဗီနား၊ကျနော်တို့လိမ့်မည်မသာအကူအညီသင်ရှာတွေ့ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြစ်နိုင်သောကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကျေးဇူးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်ကတ်၊အဖွဲ့ဝင်များထံမှသင်ယူနိုင်ပါအသီးအသီးအခြားတွေ့ဆုံမီလူတစ်ဦးအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပြန်လည်သုံးသပ်သောဆိုလိုတယ်သမျှကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်အသစ်ဖြစ်အလှဆုံးဓာတ်ပုံသင်၏)။ မှာရပ်နားနေ၊ကျနော်တို့ကြိုးပမ်းဖန်တီးရန်ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်ဖော်ရွေသောလေထုသည်အဘယ်မှာရှိသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တွက်တိရစာန်-သင်သည်သင်၏အားလပ်မှာ။ မှာရပ်နားနေ၊ကျနော်တို့လိမ့်မည်မသာအကူအညီသင်ရှာတွေ့လက်ျာလူတစ်ဦးနှင့်ဘေးကင်းစွာနှင့်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်။ ကျေးဇူးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်ကတ်၊အဖွဲ့ဝင်များထံမှသင်ယူနိုင်ပါအသီးအသီးအခြားတွေ့ဆုံမီလူတစ်ဦးအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပြန်လည်သုံးသပ်သောဆိုလိုတယ်သမျှကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်အသစ်ဖြစ်အလှဆုံးဓာတ်ပုံ။
ႏ ချိန်းတွေ့ဆိုက် -ဤသည်၏အသက်အရွယ်
တစ်ဦးရှိပါတယ်ကြီးမားသောသုံးစွဲသူများ၏နံပါတ်။ သန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများနှင့်ဤအရေအတွက်ကြီးထွားလာသည်။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးဘွတ်ပရိုဖိုင်များမပါဝင်ပါဘူးဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ရစေသာ နှင့်အခြားမြို့။ ၂။ ၂။ ကိုယ်စားလှယ်ရုရှားလူများရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောလူတို့နှင့်အတူအင္ငံျခားသားမ်ား။ အတွက်မှတ်ပုံတင်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားများ။ ၃။ သူလူဝီကသို့မဟုတ်ကောင်းသောအဆွေဖြစ်ကြ၏။ အများအပြားသောသူတို့မှတ်ပုံတင်ပြီးသူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းအပေါ်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအပါအဝင်လာကြ၏သောသူတို့အားအ ။ အလယ်စခန်းအားဆက်လက်ချင်ပါတယ်အစည်းအဝေးများ။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်၊သင်မှတ်ပုံတင်အပေါ်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသစ်များအတွက်အသိအကျွမ်း။ ဒီအပွင့်လင်းဝင်ရောက်ခွင့်တစ်အသုံးဝင်သောဝန်ဆောင်မှုကြိုက်သူတွေအတွက်ဝေမျှဖို့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်း၊ဓါတ်ပုံတွေကို၊၊အမြန်ရှာ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်မြင်ရပါလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်နှစ်ရှည်လများ၏အိပ်မက်မက်။
။ ကိုကိုးကျွန်း ၊ဖီ နှင့်၎ လယ်သမားများမှာကိုယ့်အချို့ပြင်သစ်သူအမျိုးသမီးထင်အောင်-ပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာရန်။ စွာလေ့လာရန်စိတ်အားထက်သန်အနုပညာနှင့်အလှအပ၏သင္ခန္းစာမ်ားပေါက်သော။ ဒီအဓိကိုရ၏စိတ်နှလုံးပြင်သစ်၊တစ်ဦးချစ်စရာကောင်းအဖော်၊တစ်ကြော့အဖော်နှင့်အသည်းအသန်။ ဒီ ။ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးမှတ်ပုံတင်ရေးပြီးနောက်၊ကိုယ့်အပေါ်တွေ့ဆုံရန်။ အဆင်ပြေတဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ခွင့်ပြုဖို့အလျင်အမြန်စွာဖြည့်ဆည်းလူငယ်အမျိုးသမီး။
ထိုအခါသင်အတွင်းပတ်ပတ်လည်မောင်းထုတ်နယူးယောက်နှင့်အတူဓါန္ကိုခွင့်လိုင်စင်ပလိပ်ပြားနှင့်မဝယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ဦးရုရှားအလုပ်ခန့်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ပြီးတော့ယာက္ပါ။ ငါလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲအကြံဉာဏ်မှနောက်ကျောထိုင်နှင့်စောင့်မိန်းကလေးအဘို့မိမိကိုရှာဖွေရန်။ ကျွန်တော်သိသည်အဘယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအောက်ပါအတိုင်းတူညီတဲ့ယုတ္တိဗေဒ။ ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးတဲ့အတွက် ၂၅ အနှစ်၊သူကအနည်းဆုံးတစ်ရည်းစားသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအချို့ဆက်ဆံရေးမျိုး။ သာအချက်ကိုအကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောလူဦးရေးကဲ့သို့သောစာပိုဒ်တိုများအပေါ်အင်တာနက်၊နှင့်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌ငါသည်အလောင်းအစားသာအနည်းငယ်
လွှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦး ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ချက်တင်ကစားတဲ့အပေါင်း ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲနှင့်အတူမိုဘိုင္းဖုန္းဓါတ္ပံု ချက်တင်ဗီဒီယိုများအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း ချိန်းတွေ့များအတွက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူဓါတ္ပံုဗီဒီယို ဗီဒီယိုချက်တင်အခြားရွေးချယ်စရာ
© 2021 ဗီဒီယိုစကားပြောဖီးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့